ကြက်သွန်ဖြူ Archives - MM Live News
တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ခဲ့ပြီးဆေးရုံဆေးခဏ်းတွေသွားကုတယ်မပျောက်ပါ ငွေကုန်လူပန်း ဖြစ်ပြီးအိပ်ရာထဲမှာဘုံးဘုံးလဲပြီး သူကိုယ်သူ(သေ) စာရင်းသွင်းထားတဲ့လူကို ကျွန်တော်တွေ့လို့ဒီဆေးမြီးတိုလေးပေးခဲ့ပါတယ် လူနာကမရုံမှာကြောက်လို့ လူနာကိုမှာခဲ့သေးတယ်။ ဒီဆေးကိုနေ့စဉ်တလတိတိသေက်ဘို့နဲ့. အကယ်၍မပျောက်ခဲ့သော် ဆေးဘိုးကုန်ကျငွေများကို ကျွန်တော်မှပြန်လျော်ပေးမည့် ဂတိလဲပေးခဲ့ပါတယ် နောက်တ.လအကြာမှာ တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့လူနာကို သွားကြည့်တော့ လူနာကလူကောင်းဖြစ်လို့. ဝလို့. စိုလို့. အံ့သြဘွယ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်(၂)လောက်ကပါ ၂၀၁၆…ခုကသွေးတိုးရောဂါကျွန်တော်မှာဖြစ်တယ် သွေးချိန်ကြည့်တော့အောက်သွေး(၁၂၀)အပေါ်သွေး(၁၉၀) ပါဆရာမကဂရုစိုက်ကုဘို့ပြောပြီး သွေးကျဆေးပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကတရားစခန်းပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန် တရားစခန်းအကျိုးတော်ဆောင် ဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ ဆေးဖော်ဘို့အချိန်ကမရနဲ့. တရားစခန်းပွဲလဲပြီး အောက်ဖော်ပြမည့် ဆေးမီးတိုကို.(၁၃)ရက်နေ့စဉ်သောက်လိုက်တာ….. ခုတော့ဗျာ မုန့်ဟင်းခါး ဝက်သားကြိုက်တာစား ယ္ခုစာရေးနေချိန်အထိ(ဒေါင်ဒေါင်လန်.)ဘဲဗျာကဲဆေးနည်းကလွယ်လွယ်လေး …. (၁)နွားနို့စစ်စစ် ၁. ပိသာ (၂)ကြက်သွန်ဖြူ. (ဥတလုံး)..၇…လုံးနွားနို့ကိုဆူအောင်ကြိုပါ …ပွက်ပွက်ဆူပြီဆိုရင်အခွန်နွှာထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူ(၇)လုံးကိုထည့်ပါ….. ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးနာရီကိုကြည့်ပါ(၁၀)မိနစ်ကြာရင်မီးဖိုပေါ်ကချပါပြီးရင်သောက်လို့ရတဲ့အချိန်ကနေတနေကုန်မကုန်မခြင်းနားနားပြီးသောက်ပါ…. ရောဂါနုလျင်(၁၃ )ရက် သေလု့ဆဲဆဲလူဆိုလျင်ရက်(၃၀)…..ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ ဒီဆေးနည်းလေးကို အများသူငါသိအောင် ဆက်ပြီးဖြန့်ဝေစေချင်ပါတယ်…… ဒီဆေးနည်းလေးကို ဦးနေဝင်းလက်ထက်… […]
ချောင်းဆိုးသွေးပါ ပန်းနာရင်ကြပ် TBပျောက်ဆေးနည်း လက်တွေ့ပျောက်ကင်းလို့စေတနာရှေ့ထားဆေးနည်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမေလက်တွေ့ပါ ….ချောင်းကတဟွတ်ဟွတ်သွေးစတွေကပါသေးတယ်…. မောလိုက်တာကလည်းဖိုထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲအသားရည်ကလည်းညိုညစ်ညစ်မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့… ကံကောင်းချင်တော့ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဆေးမီးတိုနဲ့ရောဂါအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆေးနည်း အိမ်မွေးကြက်ဥတလုံးထက်ခြမ်းခွဲ ပန်းကန်တလုံးထဲထည်….ကြက်ဥအခွံတခြမ်းဖြင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်ထည့်…. ကြက်သွန်ဖြူ တလုံးအခွံနွာပါးပါးလှီးဖြူးထည့် ……ဒန်အိုးထဲရေအနည်းငယ်ထည့်…… အောက်မီးနှင့်ပေါင်းခဏနေကျက်ပြီ တနေ့သုံးကြိမ်စား အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်…..။ From ♥♥♥မြန်မာ့ဆေးမီးတို unicode ခြောငျးဆိုးသှေးပါ ပနျးနာရငျကွပျ TBပြောကျဆေးနညျး လကျတှပြေ့ောကျကငျးလို့စတေနာရှထေ့ားဆေးနညျးလေးပေးလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အမလေကျတှပေ့ါ ….ခြောငျးကတဟှတျဟှတျသှေးစတှကေပါသေးတယျ…. မောလိုကျတာကလညျးဖိုထိုးနတေဲ့အတိုငျးပဲအသားရညျကလညျးညိုညဈညဈမခံစားနိုငျဘူးပေါ့… ကံကောငျးခငျြတော့ မိတျဆှတေယောကျရဲ့ဆေးမီးတိုနဲ့ရောဂါအမွဈပွတျပြောကျကငျးခဲ့ပါတယျ။ ဆေးနညျး အိမျမှေးကွကျဥတလုံးထကျခွမျးခှဲ ပနျးကနျတလုံးထဲထညျ….ကွကျဥအခှံတခွမျးဖွငျ့နှမျးဆီစဈစဈထညျ့…. ကွကျသှနျဖွူ တလုံးအခှံနှာပါးပါးလှီးဖွူးထညျ့ ……ဒနျအိုးထဲရအေနညျးငယျထညျ့…… အောကျမီးနှငျ့ပေါငျးခဏနကေကျြပွီ တနသေုံ့းကွိမျစား အမွဈပွတျပြောကျကငျးကွောငျးသတငျးကောငျးပါးလိုကျပါသညျ…..။ From ♥♥♥မွနျမာ့ဆေးမီးတို
မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားများအတွက် ကြက်သွန်ဖြူလာပါပြီ….
ကြက်သွန်ဖြူက လူ့ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းမွန်တာ မှန်ပေမယ့် အမျိုးသားတွေ ရရှိနိုင်တဲ့ သီးသန့် အကျိုးကျေးဇူး သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။ (၁) ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ကာကွယ်မှု ပုံမှန် စားတာကြောင့် ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျ စေကြောင်း လေ့လာမှု တွေအရ သိရပါတယ်။ ကြက်သွန် ဖြူက ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကို နှေးကွေးစေကြောင်း လေ့လာမှုအ များအပြားက ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာမှု တစ်ရပ်အရ ကြက် သွန်ဖြူကို များများ စားတဲ့ အမျိုးသားတွေ က ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀ ရာ ခိုင်နှုန်း လျော့ကျ နေကြောင်း သိရပါ တယ်။ […]